Who were Bengali, so called Rohingya?: ကျောက်တော်မြို့နယ်တွင် မီးရှို့မှုများပေါ်ပေါက်နေ
“ ကျွန်တော် ကျောက်တော်မြို့ ကားဂိတ်ကို သြဂတ်စ်လ ၂ ရက်နေ့ ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ မှာပိုက်သည် ရွာက မွတ်ဆလင် လူအုပ်က ညဉ့် ၂ နာရီတီးမှာ ၀င်ရောက် ဖျက်ဆီးတယ်။ ရွှေပြည်သစ် ကားးဂိတ် အပါအ၀င် တခြား အဆောက်အဦးတွေ ပြူတင်းတွေ ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံရတယ်။ မြို့ထဲက လူတွေနဲ့ လုံခြုံရေး ယူထား သူတွေ လိုက်သွားတော့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူတွေက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ ရဲကို သွားတိုင်တောာ့ စစ်တပ်က အမိန့်မရတဲ့ အတွက် ဘာမှ အရေး မယူဘူး။ ဒီလို လုပ်တော့ ရခိုင်တွေက မကျေနပ်မူတွေ တိုးပွား လာကြတယ်” ဟု ကျောက်တော် ဒေသခံ တစ်ဦးက ပြောသည်။
You are the Bengali Mogh , you are the terrorist nation on this earth.
Rohingyas are not Bengali it is your wrong imagination open your eyes you are blind and deaf fully.
ဘင်္ဂလီများ၏ လူမျိုးဝါးမျို ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခြင်း...
နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတရုံးမှ ရခိုင်ပြည်သူကို စော်ကားလိ...
ကျောက်တော်တွင် နေအိမ် ၁၆၀ကျော် မီးရှို့ခံရ
Situation in Rakhine State
ကဏ္ဍစုံလင် / တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား အငြိမ်းစားဗိုလ်ခ...
BDC ဒါရိုက်တာ ဦးမျိုးသိန်းမှ သတင်းသမားများသို့ ရှ...